समस्यारहित प्रिग्नेन्सी - विशेष - नारी
तस्बिर : Jonathan Borba
डा. स्वस्ति शर्मा
प्रिग्नेन्सीका समयमा शरीरमा आउने परिवर्तनका कारण महिलाले धेरै किसिमका स्वास्थ्य समस्या सामना गर्नुपर्छ । त्यसैले विशेष रूपमा सजगता अपनाउनुपर्छ । गर्भावस्था कुनै पनि महिलाको जीवनको सबैभन्दा रमाइलो यात्रा हो । यो यात्रामा धेरै किसिमका समस्याले सताउन सक्छन् ।
पहिले रक्तचाप सामान्य अवस्थामा भए पनि गर्भ रहेपछि रक्तचाप वृद्धि हुनसक्छ । सामान्यतया प्रिग्नेन्सीको चौथो महिनापछि (२० हप्तापछि) लगभग १० प्रतिशत महिलामा रक्तचापको समस्या हुन्छ । यसलाई प्रिग्नेन्सी इड्युस्ड हाइपरटेन्सन भनिन्छ । रक्तचाप उच्च भएका महिलाको कलेजो, मुटु तथा मिर्गौलामा असर पुग्न सक्छ । शिशुको जन्मपछि पनि ६ हप्तासम्म औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । आखिर जे भए पनि गर्भ रहेका बेला रक्तचाप बढे चिकित्सकसँग सल्लाह लिनुपर्छ । यस्तो बेला उच्च रक्तचाप देखिनुलाई ‘जेस्टेसनल हाइपरटेन्सन’ भनिन्छ । त्यसका लागि चिकित्सकको सल्लाहमा रक्तचाप कम गर्न सामान्य औषधि खानुपर्ने हुनसक्छ जसले गर्भस्थ शिशुलाई असर गर्दैन ।
कारण : ३५ वर्षको उमेरपछि गर्भवती हुनु, पारिवारिक हिस्ट्री, धेरै तौल तथा पहिलो प्रिग्नेन्सीमा रक्तचाप बढ्न सक्छ ।
लक्षण : टाउको दुख्नु तथा रिंगटा लाग्नु, आँखा धमिलो हुनु, अनुहार तथा हात सुन्निनु तथा छटपटी महसुस हुनु । ९०/१४० भन्दा बढी भए त्यसलाई उच्च रक्तचाप मानिन्छ ।
प्रभाव : गर्भस्थ शिशुको विकासमा अवरोध सिर्जना हुन्छ ।
रोकथाम : नियमित रूपमा रक्तचाप जाँच गराउनुपर्छ । औषधि नियमित रूपमा सेवन गर्नुपर्छ । नुनको मात्रा कम गर्नुपर्छ । दिनमा केही क्षण आराम गर्नुपर्छ ।
मधुमेह : गर्भावस्थामा कतिपयमा मधुमेहको समस्या सिर्जना हुन सक्छ । परिवारमा आमाबुवालाई मधुमेह छ भने पनि गर्भवती महिलामा मधुमेह देखिने सम्भावना बढ्छ । खासगरी गर्भवती महिलामा २८ हप्तापछि मधुमेह देखापर्न सक्छ । मधुमेह गर्भावस्थामा मात्र देखिएर पछि आफैं कम हुनसक्छ । गर्भावस्थामा मधुमेह देखिए चिकित्सकको सल्लाहमा रगतमा चिनीको मात्रा टेस्ट गराउनुपर्छ । गर्भावस्थामा मधुमेह देखिनुलाई ‘जेस्टेसनल डाइबिटिज’ भनिन्छ । गर्भवती महिलाको प्यांक्रियाज सामान्य अवस्थामा तीन गुणा धेरै इन्सुलिन बन्छ ताकि उसको शरीरमा सुगर लेवल नियन्त्रित रहोस् । कहिलेकाहीँ शरीरमा पर्याप्त मात्रामा इन्सुलिन बन्न पाउँदैन जसले गर्दा महिलाको प्रिग्नेन्सीमा मधुमेहको समस्या सिर्जना हुन पुग्छ ।
कारण : परिवारमा कसैलाई मधुमेह भए तथा मोटोपन ।
लक्षण : आँखा धमिलो हुनु, धेरै तिर्खा लाग्नु तथा सधै थकान महसुस हुनु ।
प्रभाव : यस्तो स्थितिमा गर्भस्थ शिशु बढी तौलको हुन्छ । यसले नर्मल डेलिभरीमा समस्या देखापर्न सक्छ । जन्मिएको केही समयपछि शिशुमा समेत मधुमेह देखापर्न सक्छ ।
रोकथाम : प्रिग्नेन्सीको २४ हप्ता पूरा भएपछि स्क्रिनिङ टेस्ट गराउनुपर्छ । सुगर लेवल बढेको पाइए चिनी, घिउ, तेल, भात, आलु तथा मैदाजस्ता क्यालोरीयुक्त खानेकुराको सेवन बन्द गर्नुपर्छ । मर्निङ वाक तथा प्रशिक्षकको सल्लाहमा एक्सरसाइज गर्न सकिन्छ । यसले पनि सुगरको मात्रा कम नभए इन्सुलिन नै लिनुपर्छ ।
प्रिग्नेन्सीका बेला यस्तो समस्या आमा तथा गर्भस्थ शिशु दुवैका लागि राम्रो मानिँदैन ।
कारण : वंशानुगत, आयोडिनको कमी, औषधिको साइडइफेक्ट आदिमा कुनै सर्जरीपछि पनि यो समस्या देखापर्न सक्छ ।
लक्षण : तीव्र रूपमा तौल बढ्नु, धेरै निद्रा लाग्नु, छालामा खस्रोपन, केश झर्नु, पटक–पटक रुघाखोकी लाग्नु तथा कब्जियत हुनु ।
प्रभाव : शिशुको आइक्यु क्षमता कम हुनु तथा प्रिम्याच्योर डेलिभरी हुन सक्ने सम्भावना वृद्धि हन्छ ।
रोकथाम : गर्भधारण गर्नुअघि थाइराइडको जाँच तथा औषधिले त्यसमा नियन्त्रण आएपछि मात्र पारिवारिक जीवन सुरु गर्नुपर्छ ।
प्रिग्नेन्सीमा धेरै महिलाले यसको सामना गर्नुपर्छ । यस्तो समस्याप्रति बेवास्ता गर्नुहुँदैन ।
कारण : प्रिग्नेन्सीमा पाठेघरको आकार ठूलो हुन्छ । यसकारण ब्ल्याडरमा दबाब पर्छ । पिसाब राम्रोसँग डिस्चार्ज हुन पाउँदैन । यसले युटीआई (युरिनरी ट्यांक इक्फेक्सन) को समस्या हुन्छ । हार्मोनसम्बन्धी परिवर्तन तथा व्यक्तिगत सफाइमा ध्यान नदिनु नै यसको प्रमुख कारण हो ।
लक्षण : पिसाब गर्दा पीडा हुनु, रोकिँदै पिसाब आउनु, पिसाबको रंग परिवर्तन हुनु, गन्हाउने पिसाब आउनु । यसैगरी योनि चिलाउनु, पोल्नु, ढाड, कम्मर दुख्नु तथा ज्वरो आउनु ।
प्रभाव : मिर्गौलामा संक्रमण, शिशुको विकासमा रोकावट तथा प्रिम्याच्योर डेलिभरी ।
बचावट : सरसफाइमा विशेषरूपले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । जुस तथा पानीजस्ता तरल पदार्थको सेवन बढी गर्नुपर्छ ।
प्रिग्नेन्सीमा केही महिलाको टाउको दुख्छ । टाउकाको पीडासँगै बान्ता पनि आउँछ । माइग्रेनले पनि सताउँछ ।
लक्षण : टाउकाको दायाँ तथा बायाँ भागमा अचानक धेरै पीडा हुनु, दृष्टि धमिलो हुनु, शरीर चिलाउनु, प्रकाश तथा आवाजबाट झर्को (इरिटेट हुनु) लाग्नु ।
कारण : फेमिली हिस्ट्री तथा हार्मोनसम्बन्धी परिवर्तन । पहिले पनि यस्तै समस्या भए प्रिग्नेन्सीमा पनि यो लक्षण देखापर्न सक्छ ।
बचावट : औषधिको नियमित सेवन, कफी तथा जंकफुडबाट टाढै रहनुपर्छ ।
प्रिग्नेन्सीमा महिलाको पाचनतन्त्रले प्रभावकारी ढंगले काम गर्दैन । एसिडिटी, ग्यास्ट्रिक तथा कब्जियतजस्ता समस्याले सताउन सक्छ ।
कारण : प्रिग्नेन्सीमा महिलाको शरीरबाट प्लेसेन्टल हार्मोनको सिक्रिएसन तीव्र हुन थाल्छ । फलस्वरूप कलेजोले बिस्तारै काम गर्न थाल्छ । ढिला खाना पच्नु तथा पेटमा ग्यास बन्नुको प्रमुख कारण पनि यही हो । प्रिग्नेन्सीको अन्तिम तीन महिनामा गर्भाशयको आकार ठूलो हुन्छ । यसको दबाबका कारण स्फिंक्टर (फुड पाइपको तलको भाग) ढिलो हुनपुग्छ भने नपचेको खाना माथितिर आउन थाल्छ । यसले गर्दा एसिडिटी, ग्यास तथा कब्जियतको समस्या हुन्छ । प्रिग्नेन्सीमा आइरन, क्याल्सियम तथा मल्टिभिटामिनको सेवन आवश्यक हुन्छ । यसले गर्दा कब्जियतको समस्या उत्पन्न हुनसक्छ ।
लक्षण : पेटको माथिल्लो भागमा पीडा, पोल्नु, शरीर चिलाउनु, अमिलो डकार आउनु, खानामा अरुचि तथा पेटमा भारीपन ।
प्रभाव : प्रिग्नेन्सीमा लगातार रूपमा कब्जियत भए पाइल्सको समस्या हुनसक्छ ।
पिठ्युँ तथा खुट्टामा पीडा
धेरैजसोलाई प्रिग्नेन्सीमा पिठ्युँ तथा कम्मरमा पीडा हुन्छ भने खुट्टासमेत सुन्निन सक्छ । यो आमसमस्या डेलिभरीपछि आफै ठीक हुन्छ ।
प्रभाव : गर्भस्थ शिशुमा प्रत्यक्ष असर पर्दैन तर यसले नर्मल डेलिभरीलाई पीडादायक बनाउनसक्छ ।
बचावट : राम्रो सपोर्टका लागि खुट्टा थोरै फैलाएर उभिनुपर्छ । लामो समयसम्म उभिनुपरे एउटा खुट्टा हल्कासँग मोड्नुपर्छ । यसो गर्दा दुवै खुट्टामा समान रूपमा भार पर्दैन । बस्नका लागि पिठ्युँलाई सपोर्ट दिने किसिमको कुर्सी छनोट गर्नुपर्छ । पिठ्युँको तलको भागमा सानो कुसन राख्न सकिन्छ । कुर्सीमा खुट्टा तल राखेर बस्नुभन्दा पनि सानो स्टुलमा खुट्टा राख्न सकिन्छ । हिल नभएको जुत्ता लगाउनुपर्छ । खसेको सामान उठाउनुपरे कम्मरको बलले झुक्नुभन्दा पनि घुँडा मोडेर बिस्तारै तल बसेर सामान उठाउनुपर्छ । सुत्ने बेलामा पिठ्युँको बल प्रयोग गर्नुभन्दा पनि बायाँ फर्केर तथा घुँडा हल्का मोडेर बीचमा सिरानी राख्नुपर्छ । त्यसबाहेक प्रिग्नेन्सीमा समय अगावै पानी बग्ने, रक्तस्राव हुने, बच्चा उल्टो, तेर्सो बस्ने समस्या पनि उत्पन्न हुनसक्छ ।
के खाने गर्भावस्थामा ?
धेरै महिला गर्भावस्थामा खानपानलाई लिएर बढी नै सतर्क हुन्छन् । यो समयमा आफ्ना लागि मात्र नभएर गर्भस्थ शिशुको पोषणका सम्बन्धमा समेत ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । यतिबेला गर्भवती महिलालाई गर्भस्थ शिशुको विकासका लागि पर्याप्त मात्रामा पौष्टिक आहारा आवश्यक हुन्छ । शिशुलाई पूर्णरूपमा स्वस्थ राख्न कार्बोहाइड्रेड, प्रोटिन तथा फ्याट चाहिन्छ । आममानिसलाई सधै १ सय क्यालोरी आवश्यक हुन्छ भने गर्भवती महिलालाई त्यसभन्दा बढी क्यालोरीको आवश्यकता पर्छ ।
प्रोटिन तथा बोसोयुक्त खाना
गर्भावस्थामा प्रोटिन धेरै जरुरी हुन्छ । यतिबेला रगत बढाउने खानेकुरा खानुपर्छ । डेरी प्रोडक्ट दही, पनीर आदि खान सकिन्छ । गर्भावस्थामा कार्बोहाइड्रेड प्राप्त गर्न टुसा उम्रिएका गेडागुडी खानु उपयुक्त हुन्छ । हरियो सागपात तथा फलफूल पनि यो बेलामा खानु उपयुक्त हुन्छ भने अम्बा, आँप, खरबुजा आदि पनि खान सकिन्छ । केराबाट भिटामिन बी ६ तथा पोटासियम पाइन्छ, यो गर्भको शिशुका लागि समेत लाभदायक हुन्छ ।
आमा बन्न त्यति सहज हुँदैन, यतिबेला महिलामा चिडचिडेपन देखापर्नु सामान्य हो । यस्तो भए केही न केही खानेकुरा खाइरहनुपर्छ तर धेरै चिल्लो तथा मसालेदार खानेकुरा भने खानुहुँदैन । कोल्ड ड्रिंक्स, एवं चिया–कफी पनि कम सेवन गर्नुपर्छ ।
फाल्गुन १७, २०७६ - कसरी गर्ने गर्भावस्थाको हेरचाह ?
फाल्गुन १६, २०७६ - मातृत्वको तयारी